Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Seranam-piaramanidina Alitalia: Mihidy ho an'ny orinasa
Airlines • Aviation • Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Manomboka amin'ny sasakalin'ny 24 aogositra 2021, ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka Alitalia dia tsy hivarotra tapakila intsony ho an'ny sidina mitranga manomboka ny 15 Oktobra amin'ny. Handefa mailaka amin'ireo mpanjifany izay nividy sidina ny 15 Oktobra 2021, mandroso.
Inona avy ireo safidy ho an'ireo mpanjifa ireo ary inona no mitranga amin'ny tapakilan-dry zareo izay efa naloany?
Homena safidy ny mpanjifa hisolo ny sidina miaraka amin'ny fitoviana hafa tantanan'ny orinasa Alitalia amin'ny 14 Oktobra 2021.
Ho azo atao ihany koa ny handraisan'ny mpanjifa vola feno ny tapakilan'izy ireo.
Rehefa nahazo fahazoan-dàlana hiasa sy taratasy fanamarinana mpandraharaha fiaramanidina avy amin'ny ENAC, ny Fahefana avaratry ny fiaramanidina sivily tamin'ny 18 aogositra, ny seranam-piaramanidina ITA (Italia Trasporto Aereo), fantatra amin'ny anarana taloha hoe Alitalia, dia vonona amin'ny fiaingana ofisialy. Hanokatra varotra tapakila manomboka amin'ny 26 aogositra ny ITA.
Ny tolotra fatorana dia niadana ho an'ny fananana sidina Alitalia
Ny Birao ITA, izay nivory teo ambany fitantanan'i Alfredo Altavilla, dia nanapa-kevitra ny hanova ny tolotra tsy misy fifamatorana izay efa nalefa tamin'ny 16 Aogositra ho an'ny Fitantanana Ankapobeny an'ny Alitalia ho fifamatorana. Ity tolotra ity dia misy fiaramanidina miisa 52, slot maromaro mifandraika amin'izany, ary koa fifanarahana sy fananana fanampiny avy amin'ny sampana Aviation hanombohana ny asany amin'ny 15 Oktobra.
Iza no hitantana ny serivisy ho an'ny mpanjifa?
Ny mpandraharaha ny ivon-toeran'ny mpanjifa ITA vaovao dia i Covisian izay mampiasa teknolojia rahona miaraka amin'ny mpiara-miasa toa ny Salesforce sy Amazon Web.
Ankoatr'izay, manomboka amin'ny 26 Aogositra, ny tranokala fanangonana ny fisoratana anarana avy amin'ireo olona liana hiasa amin'ny ITA dia ho lasa miasa. Aorian'izay dia hisy ny fihaonana amin'ireo sendika hanombohana ny fifampiraharahana momba ny fifanarahana asa vaovao.
ITA hanombanana ireo mpiasa ankehitriny amin'ny asa
Hanomboka ny asany ny ITA miaraka amin'ireo mpiasa 2,800. Azo vakiana amin'ny serasera alefan'ny orinasa any amin'ireo sendika izany raha ny fiatombohan'ny fifandonana. Ny mpiasa izay "ilaina amin'ny fanombohana ireo hetsika" dia "mitovy, raha ny drafitry ny asa fandraharahana, ho an'ny mpiasa 2,800 XNUMX", hoy ny fanazavan'i ITA, izay nilaza fa "azo atao" ny mamorona ny mpiasa "ary manombatombana ihany koa ireo mpilatsaka hofidina. nataon'ny mpiasan'ny Alitalia Sai ankehitriny. ”
Ny Business Plan dia manome fa ny orinasa dia afaka "mampitombo ny mpiasa voalohany" mandra-pahatongan'ny "nahatratra ny totalin'ny mpiasa 5,750 2025 amin'ny XNUMX. Mandritra izany fotoana izany, nanambara ny ITA fa ny mpiasa rehetra dia hangataka hahazo ny Pass Green Green anti-COVID.
Famantarana ny mpamatsy fiaramanidina stratejika
Namerina ny fanapaha-keviny ny ITA fa hanao homogeneous ny sambo-fiara mandritra ny drafitra indostrialy ary, hanatanterahana izany, ny hanombohana ny fanavaozana ny andiany voalohany araka izay tratra, hisolo azy amin'ny taranaka vaovaon'ny fiaramanidina mahomby sy tia tontolo iainana. .
Ny fanapahan-kevitra momba ny firafitry ny fiaramanidina ho avy dia horaisina ary hampitaina amin'ny volana septambra. ITA koa dia mandefa programa fahatokisana vaovao "lohalaharana amin'ny kalitaon'ny serivisy natolotra ny mpanjifa, azo ampifandraisina amin'ireo mpiara-miombon'antoka indostrialy hafa" satria ny lalàna eropeana dia manakana ny orinasa vaovao tsy afaka mifaninana amin'ny fahazoana ny Alitalia Fandaharana MilleMiglia.
Shina hanokatra ny sisintaniny aorian'ny 85% ny mponina ...
Nantsoin'ny minisiteran'ny fizahantany Bahamas ho mpiara-miombon'antoka FINN ho ...
India - Fizahan-tany sy fizahan-tany any Kazakhstan: Inona ny ...
Mpanakanto marobe miady amin'ny soavaly ho an'ny soavaly sy ...
60% ny Amerikanina milaza fa hijanona ny sarontava
Seychelles dia miarahaba ny fitsaharana amin'ny famerana ny dia ...